ဒါက Android logo အသစ်ဖြစ်မလား။ | Androidsis ပါ
Francisco Ruiz | | NOTICIAS, လဲ tutorial
မှစ. Android ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည် ဖခင်များကိုတည်ထောင်သူ Andy Rubin၊ Rich Miner၊ Nick Sears နှင့် Chris White တို့ကဲ့သို့အမြော်အမြင်ရှိသူလေး ဦး ၏အိပ်မက်အဖြစ် Android Inc မှ။ ထိုအချိန်မှစ၍ များစွာသောအဖြစ်အပျက်များဖြစ်ခဲ့ပြီး Google လည်ပတ်မှုစနစ်အပြောင်းအလဲများသည်ဤတစ်လျှောက်လုံးမြင်တွေ့ခဲ့ရသည် 11 နှစ်တည်ရှိမှု.
ယခု Android logo အသစ်ကိုအသစ်ပြောင်းရန်အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်သည် Ron Amadeo ၏တရားဝင် G + စာမျက်နှာ နှင့် LG G Watch ၏ဗီဒီယိုတင်ဆက်မှုAndroid Wear နည်းပညာထည့်သွင်းထားသောပထမဆုံးထုတ်ကုန်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသနိုင်သည်သို့မဟုတ်အရိပ်အမြွက်ပြောကြားသည် android logo အသစ်.
၂၀၀၃ ခုနှစ်သည် Android ၏တရားဝင်နေ့ရက်ဖြစ်သော်လည်း ၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိ Android operating system ဖြင့်ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းကို ၀ ယ်ယူနိုင်ခဲ့သော်လည်း HTC Dream သို့မဟုတ် HTC G2003 ဟုလူသိများကြောင်းသင်မှတ်မိပါသလား။ Android ဆိုတာပထမဆုံးသိကြတဲ့နောက်ပိုင်းကတည်းကလိုက်နာခဲ့တဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ခြင်း Android 1.0 Apple Pieဒါကစိတ်ကူးနိုင်ပြီးလုံးဝလိုအပ်တယ်၊ Android လိုဂိုသက်တမ်းတိုးခြင်း ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုနည်းနည်းပဲဟောင်းပုံရတယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ခြားအချိန်ကတောင်မှပိုင်ဆိုင်တာပဲ။
Android logo အသစ်၏အသစ်ပြန်လည်ဒီဇိုင်းတွင်၎င်းကိုမည်သို့မြင်နိုင်သနည်း ဖောင့်တစ် ဦး ထက်ပိုသော rounded ပုံသဏ္onာန်ပေါ်ယူကြပြီ လက်ရှိပုံစံများကိုစက်ရုပ်စတိုင်အက္ခရာများကိုတုပပြီး၊ ငါပြောသည့်အတိုင်းလွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ခန့်က၎င်းသည်အများဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်မှာခေတ်နောက်ကျသွားပြီဖြစ်သည့် Android ၏တီထွင်သူများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ operating system ကို။
ပြီးတော့သင်, Android Curves အသစ်ကိုမင်းဘယ်လိုမြင်သလဲ။.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Ron Amadeo နှင့် LG တို့က Android logo သစ်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုသဲလွန်စပေးသည်
ငါ့အဘို့လိုဂိုစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောသည် !!!! ထိုအတူတူနေသင့်ပါတယ် ၎င်းသည်လူတို့၏စိတ်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါမပြောင်းနိုင်ဘူးလို့မျှော်လင့်တယ်၊
ခင်ဗျားရဲ့အတွေးအခေါ်တွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက် Android 1.0 ကိုရောက်နေ ဦး မှာပါ။
Orlando တွင် rodriguez ဟုသူကပြောသည်
Orlando Rodriguez အားပြန်ပြောပါ
ယခုသင် Hangouts တွင်ဖုန်းမြည်သံနှင့်အသိပေးချက်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်